शीर्ष ९ नेताको गृहजिल्लामा कस्तो छ नेकपा विवाद ? - समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २७, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — आन्तरिक विवादले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म र प्रदेशदेखि गाउँसम्म नेकपाका संगठनात्मक काम प्रभावित भएका छन् । पाटीका दुईअध्यक्षसहित सचिवालयमा उत्पन्न विवाद र नेताहरुबीचको अविश्वासको सिधै असर नेकपाका तल्ला कमिटीमा पनि प्रत्यक्षरुपमा देखिन थालेको छ ।
केन्द्रमा जस्तै जिल्लामा पनि नेकपामा गुटबन्दी छ र स्थानीय नेतृत्ववीच खिचातानी छ । विवाद नभएको जिल्ला नै छैन् ।
केन्द्रीय नेतृत्वतहमा देखिएको तनावले सचिवालयका नेताहरुको जिल्लासमेत बढी प्रभावित भएको त्यहाँको स्थानीय नेतृत्वको अनुभव छ । दुई पार्टीबीच एकताको दुई बर्ष पुगे पनि स्थानीय तहमा अझै संगठनात्मक र भावनात्मक एकता नभइसकेको नेताहरु बताउँछन् । केन्द्रको विवादले कार्यकर्ताको मानसिकता विभाजित छ र उनीहरु उत्साही छैनन् । कतै पार्टी विभाजन भइहाल्छ कि भन्ने त्रास जिल्लाका नेता–कार्यकर्तामा छ ।
नेतृत्वको टकरावको असर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला चितवन, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको गृहजिल्ला इलाम र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका गृहजिल्ला रौतहटमा परेको छ । अरु नेताको तुलनामा नेपालको गृहजिल्ला रौतहटमा विवाद धेरै देखिएको छ ।
यसबाहेक पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको गृहजिल्ला गोरखा, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको गृहजिल्ला (उनको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–५) काठमाडौं, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको गृहजिल्ला चितवन र महासचिव विष्णु पौडेलको गृहजिल्ला रुपन्देहीमा पनि नेकपा विवादको असर छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा जिल्ला नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले केन्द्रको विवादको असर, अवस्था र मनौवैज्ञानिक प्रवाह विस्तृतरुपमै बताएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाका इन्चार्ज रविन कोईरालाका अनुसार केन्द्रको टकराव जिल्लामा प्रष्ट देखिएको छ । ‘एकता नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक एकता हो । एकता बचाउने कुरा कति महत्वपूर्ण छ, त्यसको मर्म, महत्व एकता गर्नेलाई थाहा छ । अहिले केही विग्रह आएका छन् । जसले पार्टीमात्रै हैन, मतदातामा समेत प्रभाव पारेको छ । केही मान्छे उदण्दतापूर्ण रुपले प्रस्तुत हुने, नारा जुलुस गरिहाल्ने, पार्टी फुटे पनि ठिक हुन्छ भन्ने चरित्रका पनि छन् । उनीहरुमा यो प्रवृति प्रकट भएको छ ।’
झापा इन्चार्ज कोइराला थप्छन्, ‘ती र त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता जिल्लामा देखिएको छ । माथि शीर्ष नेताहरुबीचको टकरावको असर जिल्लामा पनि छ । कोरोनाका कारण पार्टी बैठक बसेका छैनन् । तर, सडकमा जुलुस निकाल्ने काम भयो । एकथरी पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन भन्नेले पार्टी कार्यालयमा आएर औपचारिक रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाए । एकथरी सडकमा जुलुस निकाले ।'
ओलीको जस्तै अर्का अध्यक्ष दाहालको गृहजिल्ला चितवन पनि समस्यारहित छैन । जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियार भन्छन्, ‘संरचनागत हिसाबले पनि स्थानीय कमिटीका समस्या केन्द्रीय कमिटीमा गएर ठोकिन्छ । मूल नेतृत्वमा देखिएका समस्याको प्रभाव तल्ला कमिटीमा पनि देखिन्छन् । त्यसकारण स्वभावैले धेरै–थोरै प्रभाव जिल्लामा परेको छ । तर, कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्तरसंघर्ष हुन्छन् । समस्या हल गर्नेतर्फ नेताहरु लाग्नु पनि भएको छ ।’
चितवन नेकपाका आठौं वरियतामा रहेका नेता तथा गृहमन्त्री थापाको पनि जिल्ला हो । पछिल्लो समय उनी ओलीनिकट देखिएका छन् ।
नेकपामा तेस्रो वरियताका नेता खनालको गृहजिल्ला इलामको अवस्था केही शान्त रहेको त्यहाँको नेतृत्वको दावी छ । जिल्ला इन्चार्ज धीरेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘देशले स्थायीत्व खोजेको छ । विचार र कायशैलीमा केही समस्या छन् भने छलफल बहस गरेर मिलाउनु पर्छ भन्ने जिल्लामा धेरैको भावना छ । अहिलेसम्म जिल्लामा गुटगत भेला, गतिविधि भएका छैनन् । अहिलेसम्म तिक्ततापूर्ण अवस्था छैन । तर के–कसो हुन्छ भन्ने चासो सबैमा छ ।’
तर, जिल्ला इन्चार्जको दावीलाई सचिव सोममाया राई अस्वीकार गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘केन्द्रको विवादको असर जिल्लामा छँदै छैन भन्ने होइन । यहाँ पनि भित्रभित्र केही गतिविधि भएका छन् भन्ने कताकता सुनिएको हो । तर, केन्द्रमा जे जस्तो भए पनि जिल्लामा अर्न्तविरोध देखिन हुँदैन भन्ने बुझाई हामी नेतृत्व तहमा छ । त्यसकारण ठूलो विवाद अहिलेसम्म देखिएको छैन । सबैको चासो एकता जोगाउनु पर्छ भन्नेमा छ ।’ इलाम ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ्‍को पनि गृहजिल्ला हो ।
नेकपामा चौथो वरियताका नेता नेपालको गृहजिल्ला रौतहटमा एकतादेखि कै विवाद थियो । त्यसमाथि अहिले केन्द्रको विवादको असर थपिएको छ । रौतहट जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कमल यादव जिल्लाको स्थितिबारे भन्छन्, ‘जिल्लामा पार्टीका गतिविधि शुन्य छन् । व्यक्ति–व्यक्तिका गतिविधि भएका छन् । शीर्ष नेताको लविइङमा गुटगत छलफल हुन्छन् । तर, सांगठनिक काम अगाडि बढेका छैनन् । पुरानै विवाद पनि छ । पूर्वमाओवादीका साथीहरुको विवादले गर्दा अहिलेसम्म जिल्ला कमिटीको सपथ हुन सकेको छैन । त्यसमाथि अहिले केन्द्रको विवादको असर देखिएको छ ।’
पाँचौं वरियतामा रहेका नेता गौतमको गृहजिल्ला बर्दियामा पनि केन्द्रको विवादको असर पुगेको छ । गौतम पछिल्लो समय दाहाल–नेपाल समूहबाट अलग्गिएका छन् । गौतमले विज्ञप्ति निकालेर आफू कुनै गुटमा नसरहेको प्रष्टीकरणसमेत दिएका छन् । यद्यपि उनको भूमिकलाई लिएर भने पार्टीभित्रै प्रश्न छन् ।
गौतमको गृहजिल्ला बर्दियामा अवस्था कस्तो छ ? जिल्ला इन्चार्ज लक्ष्मण ज्ञवालीको जवाफ छ, ‘मैले कुनै नेताको पछि नलागेर पार्टीको निर्णय र निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौं भनेर जिल्ला कमिटीका साथीहरुलाई भनेको छु । यद्यपि केही साथीहरुले आफ्नै ढंगले अब कता लाग्ने भन्ने चलखेल गर्नु भएको छ । सकेसम्म विभाजन रौकौं । यदि सकिएन भने भोलि कस्तो परिस्थित आउँछ, के एजेण्डा आउँछन्, त्यस्तो अवस्थामा बहस छलफल गरेर कता लाग्नु पर्छ लागौंला । तर, अहिले केही नगरौं भनेको छु । त्यसकारण अन्य जिल्लामा जस्तो तिक्तापूर्ण अवस्था छैन ।’
ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रको विवादले नेता कार्यकर्तामा मनोवैज्ञानिक असर भने धेरै नै परेको छ । बर्दियामा एकतापूर्व पूर्व एमालेमै समेत समस्या थियो । अन्तरघातका कारण आफूले २०७४ को चुनाव हार्नुपरेको गौतमले बताउँदै आएका छन् ।
विवादका मामलामा नेकपामा छैटौं वरियतामा रहेका नेता श्रेष्ठको गृहजिल्ला गोरखाको अवस्था पनि औसत छ । जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण धिताल भन्छन्, ‘पार्टीका गतिविधि केही भएका छैनन् । अहिले माथि देखिएको विवाद जिल्लामा देखिनु हुँदैन । माथि नेताहरु कुनै न कुनै सर्तमा मिल्छन् । तल बेकारमा किन विभाजित हुनुपर्‍यो ? त्यसकारण मैले जिल्लामा कुरा बिग्रन दिएको छैन । आफ्ना ढंगले कुरा नगरौं, सबै मिलेर जानुपर्छ भनेको छु ।’ तर, जिल्ला नेतृत्वबीच पुरानै अन्तरविरोध भने यथावत छन् ।
सातौं वरियतामा रहेका नेता पोखरेलको जिल्ला काठमाडौं हो । देशको राजधानी पनि भएको हुँदा यो जिल्लामा केन्द्रीय तहका नेताहरुबीच विवादको असर सिधा र सबैभन्दा धेरै पर्ने गरेको छ । यसको पुष्टि नेकपाको काठमाडौं जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको भनाईले गर्छ ।
जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण राई भन्छन्, ‘काठमाडौं देशको राजधानी पनि भएको हुँदा पार्टी केन्द्रको विवादको असर सिधा जिल्ला मातहतका कमिटीमा पर्नु स्वभाविक भयो । माथि नेताहरुबीच झगडा भएपछि कार्यकर्ताको मानसिकता पनि विभाजित हुन्छ । एकीकरणको काम अझै बाँकी छ । बाँकी काम नटुंगिदै यस्तोखालको विवादले एकता प्रक्रिया नै के हुने हो भन्ने त्रास कार्यकर्तामा छ । यसले गर्दा काम गर्ने उत्साह छैन । अहिले केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटीका बैठक बस्न सकेका छैनन् भने हामी पनि छुट्टै एजेण्डा लगेर बैठक बस्ने स्थिति छैन ।’
अध्यक्ष राई मदन भण्डारी फाउन्डेसनको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । त्यसकारण उनले फाउन्डेसनको नाममा कार्यक्रम गर्न सक्रिय भएको आरोप अर्को समूहको छ ।
काठमाडौं जिल्ला कमिटी सचिव हिमाल शर्मा भन्छन्, ‘पार्टी केन्द्रको विवाद काठमाडौं जिल्लामा पनि परेको छ । कोरोना र केन्द्रको लफडाले पार्टीका गतिविधिहरु भएका छैनन् । तर, जिल्लाको अध्यक्ष मदन भण्डारी फाउन्डेशनका गतिविधिमा लाग्नु भएको छ । त्यही ढंगले हामी अर्को कुनै संस्थाबाट जाने कुरा भएन । पार्टीको संस्थागत निर्णयमा नै काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । अहिले स्थिति त्यस्तो सहज छैन ।’
अर्को समूहको आरोपबारे अध्यक्ष राई भन्छन् ‘यो पुरानो संस्था हो । पार्टीको काम भए पनि नभए पनि म त्यसमा काम गर्छु । फाउन्डेसनले नियमित गतिविधि गर्छ । पार्टीभित्र थुप्रै नेताहरुका नाममा संस्था छन् । पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष नै माधव नेपाल हुनुहुन्छ । सबै आ–आफ्नो काममा छन् । पार्टीको काम छाडेर म त्यहाँ लागेको हैन ।’
महासचिव पौडेलको गृहजिल्ला रुपन्देहीमा पनि केन्द्रको विवादको सिधा असर छ । यहाँ स्थानीय नेतृत्वबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । जिल्ला इन्चार्ज लिला गिरी भन्छन्, ‘केन्द्रको विवादले सांगठनिक कार्यमा अवरोध गरेको छ । अहिले माथि बेमौसमको बाजा बजाइएको छ । त्यसको विरुद्ध स्थानीय कमिटी र अधिकांश कार्यकर्ता छन् । कमिटीगत हिसाबले भन्दा पनि व्यक्ति व्यक्ति भेट्ने छलफल हुने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा यो वा त्यो गुट दुवैका यस्ता छलफल भएका छन् ।’ गिरीको दावीअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई अर्को चुनावसम्म काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने जिल्लामा अधिकांशको मत छ ।
सोही जिल्लाका अध्यक्ष शिवराज सुवेदी भन्छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक विवाद हो । समयक्रममा समाधान हुन्छ । अहिले कोरोनाका कारण बैठक बस्न मिलेन । हाम्रा काम नियमित छन् । हाम्रा अरु कमिटी प्रणाली नियमित छन् ।’
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ २०:४५
चितुवाको छालासहित ७ पक्राउ
भक्तपुर — चितुवाको छालासहित प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मंगलबार चाँगुनारायण नगरपालिका–८ सुडालबाट उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा रामेछाप सुनपाती गाउँपालिका–५ का १९ वर्षीय कुमार लामा, १७ वर्षीय फुसाङ तामाङ, १८ वर्षीय हिमाल लामा, २१ वर्षीय पासाङ तामाङ, काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका–९ का २२ वर्षीय सञ्जिव सिंजाली मगर, काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपालिका–१० का वर्षीय दिपेश तामाङ र २३ वर्षीय मिलन मगर छन् ।
उनीहरुको साथबाट १ थान चितुवाको छाला, बा ९० प ६५१० नम्बरको मोटरसाइकल,९ थान मोबाइल बरामद गरिएको भक्तपुर प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिपक गिरीले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ १९:५८